သငျသညျအပိုဆောင်းမေးခွန်းများသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကလိုအပ်ခဲ့လျှင်, jaypol929@gmail.com မှာအီးမေးလ်ကတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်ကြဘူး
192-168-1-1 IP Address ကိုအင်ဖိုမှတ်တမ်းဖိုင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးစံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်ပါအတိုင်း. သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်များသွားရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါဤဖိုင်များကိုဧည့်သည်များ log. အားလုံး hosting ကုမ္ပဏီများသည်ဤအခြင်းနှင့် hosting ဝန်ဆောင်မှုတွေကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပြုပါ’ analytics. မှတ်တမ်းဖိုင်တွေကစုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များအင်တာနက်ပရိုတိုကောများပါဝင် (အိုင်ပီ) လိပ်စာများ, ဘရောက်ဇာအမျိုးအစား, Internet Service Provider (ISP က), နေ့စွဲနှင့်အချိန်တံဆိပ်ခေါင်း, ရည်ညွှန်း / ထွက်ပေါက်စာမကျြနှာ, နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကလစ်၏နံပါတ်. ဤရွေ့ကားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်ကြောင်းမဆိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်စပ်ကြသည်မဟုတ်. သတင်းအချက်အလက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာအဘို့ဖြစ်၏, ဆိုက်စီမံခန့်ခွဲ, ခြေရာခံအသုံးပြုသူများသည်’ အဆိုပါ website တွင်လှုပ်ရှားမှု, လူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်း.
အခြားမည်သည့် website ကိုလိုပဲ, 192-168-1-1 IP Address ကိုအင်ဖို '' cookies တွေကို '' ကိုအသုံးပြုသည်. ဤရွေ့ကား cookies များကိုဧည့်သည်များအပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်ရန်အသုံးပြုကြသည်’ ဦးစားပေး, အဆိုပါဧည့်သည်ဝင်ရောက်သို့မဟုတ်သွားရောက်လည်ပတ်သောက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်နှင့်စာမျက်နှာများ. အဆိုပါအချက်အလက်များသည်အသုံးပြုသူများပိုကောင်းအောင်အသုံးပြုသည်’ ဧည့်သည်များပေါ်တွင်အခြေခံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝဘ်စာမျက်နှာအကြောင်းအရာစိတ်ကြိုက်နေဖြင့်အတွေ့အကြုံ’ ဘရောက်ဇာအမျိုးအစားနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားအချက်အလက်.
မှတ်ရန် 192-168-1-1 IP Address ကိုအင်ဖိုမှဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ် Third-party ကြော်ငြာရှင်များကအသုံးပြုနေကြသည်ဤ cookies တွေကိုထိန်းချုပ်အဘယ်သူမျှမရှိတယ်.
သင်သည်သင်၏တစ်ဦးချင်းစီကို browser အတွက်ရွေးချယ်စရာများမှတဆင့် cookies တွေကို disable လုပ်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်. သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကို web browser များနှင့်အတူ cookie ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုသိရန်, က browser များမှာတွေ့နိုင်ပါသည်’ သက်ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်များ. ကွတ်ကီးဘာတွေလဲ?
အင်တာနက်သုံးနေစဉ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေး၏နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသားသမီးတို့အဘို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြည့်စွက်နေသည်. ကျနော်တို့ကိုစောငျ့ရှောကျမိဘများနှင့်အုပ်ထိန်းသူများအားပေး, တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်, နှင့် / သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပဲ့ပြင်.
192-168-1-1 IP Address ကိုအင်ဖိုသိလျက်နှစ်အောက်ကလေးများအနေဖြင့်မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာခွဲခြားသိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းမထားဘူး 13. သင်သည်သင်၏ကလေးသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်သတင်းအချက်အလက်ဒီလိုမျိုးထောက်ပံ့ပေးကြောင်းထင်နေလျှင်, ကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်သင့်အားအားပေးကျနော်တို့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်တမ်းများအနေဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုပြုလိမ့်မည်.